VaRoma 6 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba kuvaRoma 6:1-23
Upenyu hutsva kuburikidza nekubhabhatidzwa muna Kristu (1-11)
Musarega chivi chichitonga mumiviri yenyu (12-14)
Kubva pakuva varanda vechivi kuenda pakuva varanda vaMwari (15-23)
Mubayiro wechivi rufu, asi chipo chaMwari upenyu (23)
6 Saka totii? Toramba tiri muchivi here kuti tirambe tichingonzwirwawo nyasha? 2 Hazvifaniri kudaro zvachose! Tingaramba sei tichirarama muchivi+ isu takafa machiri?+ 3 Kana kuti hamuzivi here kuti isu tese takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu+ takabhabhatidzwa murufu rwake?+ 4 Saka takavigwa pamwe chete naye nerubhabhatidzo rwedu murufu rwake,+ kuti sekumutswa kwakaitwa Kristu kuvakafa nekubwinya kwaBaba, isuwo tinofanira kufamba muupenyu hutsva.+ 5 Kana takabatana naye murufu rwakafanana nerwake,+ chokwadi tichabatanawo naye parumuko rwakafanana nerwake.+ 6 Nekuti tinoziva kuti unhu hwedu hwekare hwakarovererwa pamwe chete naye+ kuti muviri wedu une chivi ushaye simba,+ kuti tirege kuramba tiri varanda vechivi.+ 7 Nekuti uya anenge afa asunungurwa pachivi* chake. 8 Uyezve kana takafa naKristu, tinotenda kuti tichararamawo naye. 9 Nekuti tinoziva kuti sezvo Kristu akamutswa kuvakafa,+ haachafizve;+ rufu harusisiri tenzi paari. 10 Nekuti rufu rwaakafa, akafira chivi* kamwe chete zvikabva zvakwana,+ asi upenyu hwaanorarama, anoraramira Mwari. 11 Saka nemiwo zvionei semakafa kuchivi asi muchiraramira Mwari muna Kristu Jesu.+ 12 Saka musarega chivi chichiramba chichikutongai samambo mumiviri yenyu inofa+ kuti muteerere kuchiva kwayo. 13 Uye musaramba muchipa miviri yenyu* kuchivi sezvombo zvekusarurama, asi imi vacho zviisei kuna Mwari sevanhu vakamutswa kuvakafa, muchipawo miviri yenyu* kuna Mwari sezvombo zvekururama.+ 14 Nekuti chivi hachifaniri kuva tenzi pamuri, sezvo musiri pasi pemutemo+ asi pasi penyasha.+ 15 Saka zviri kureva kutii? Toita chivi here nekuti hatisi pasi pemutemo asi pasi penyasha?+ Hazvifaniri kudaro zvachose! 16 Hamuzivi here kuti kana muchizvipa kumunhu sevaranda vanoteerera, muri varanda vewamunoteerera wacho,+ vangava vechivi+ chinotungamirira kurufu+ kana kuti vekuteerera kunotungamirira kukururama? 17 Asi tinotenda Mwari kuti kunyange zvazvo maimbova varanda vechivi, makava vanhu vanoteerera zvichibva pamwoyo madzidzisiro iwayo amakaiswa kwaari. 18 Sezvo makasunungurwa pakuva varanda vechivi,+ makava varanda vekururama.+ 19 Ndiri kutaura sematauriro anoita vanhu ndichizviitira kusasimba kwenyama yenyu; nekuti sekupa kwamakaita nhengo dzenyu kuti dzive varanda vekusachena nekusateerera mutemo kunotungamirira kukusateerera mutemo, iye zvino chipaiwo nhengo dzenyu sevaranda vekururama kunotungamirira kuutsvene.+ 20 Nekuti pamakanga muri varanda vechivi, makanga makasununguka pakururama. 21 Saka panguva iyoyo maibereka zvibereko zvakaita sei? Zvinhu zvamava kunyara nazvo iye zvino. Nekuti zvinhu izvozvo zvinoguma nerufu.+ 22 Asi sezvo iye zvino makasunungurwa pachivi mukava varanda vaMwari, muri kubereka zvibereko munzira yeutsvene,+ uye izvi zvinoguma neupenyu husingaperi.+ 23 Nekuti mubayiro wechivi ndirwo rufu,+ asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu+ ndihwo upenyu husingaperi.+
^ Kana kuti “aregererwa chivi.”
^ Kureva kuti, akafira kuti abvise chivi.
^ ChiGir., “nhengo dzemiviri yenyu.”